थाईल्याण्डमा HGH वजन कम बैkकोकमा मोटो हराउन जेनोट्रोपिन प्रयोग गर्नुहोस् - HGH बैंकक
मानव विकास हार्मोन (somatotropin, HGH) धेरै मानिसहरू थाईल्याण्ड मांसपेशिहरु को निर्माण एथलीटों को प्रक्रिया संग जुडे हो। यो तरिका हो - HGH एक बलियो anabolic प्रभाव छ, मांसपेशियों को विकास को प्रोत्साहित, प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत र पनि कुल कायाकल्प को प्रभाव को कारण बनता छ। शरीरको मोट कम गर्न क्षमताको यी अवसरहरूको लागि सामान्यतया दृष्टि हराएको छ, तर बेकारमा - वृद्धि हार्मोन थप पाउन्ड ठूलो जलाउन।
उदाहरणको लागि, तपाईं 1998 मा बैk्कक विश्वविद्यालयको अध्ययनमा जान सक्नुहुन्छ, जुन 24 वयस्कहरूले दैनिक2मिलीग्राम -5मिलीग्राम HGH छ महिनाको लागि प्राप्त गर्‍यो। यस अवधिमा उनीहरूको शरीरको जनसंख्या कम भएन, तर मांसपेशी र एडिपोज टिश्यू बीचको अनुपात नाटकीय रूपमा परिवर्तन भएको छ - औसतन, प्रत्येक सहभागीले 5.5 पाउण्डको मांसपेशी हासिल गर्‍यो र, खास गरी, 5.7 किलोग्राम बोसो गुमायो।
र सबैभन्दा ठूलो बोसो घाटा पेटमा देखियो। यसमा कुनै आश्चर्य छैन कि अन्तिम पटक यो शरीरमा फ्याटको प्रतिशतलाई कम गर्न खोज्ने धेरै एथलीटहरूको लागि छनोटको जेनोट्रोपिन, जिन्ट्रोपिन र एन्सोमोन र अन्य लागूपदार्थको हार्मोनको रूपमा छ।
कसरी वजन घटाउन को लागी एच?
HGH को बोसो जलाउने गुणहरूको ठूलो अंश मेटाबोलिज्ममा यसको प्रभावसँग सम्बन्धित छ। मेटाबोलिज्म, यो सबैलाई थाहा छ कि मानव शरीरमा लगभग कुनै पनि कोष या त फ्याट्टी एसिड वा ग्लुकोज द्वारा संचालित हुन्छ। र यदि रगतमा ग्लूकोजको मात्रा एनाबोलिक इन्सुलिन हार्मोन द्वारा नियन्त्रित गरियो भने, विकास हर्मोनमा फ्याटी एसिडहरूको मात्रा।
तपाईको वजन घटाउने र बोसो घटाउने लक्ष्य हासिल गर्न कोशिकालाई ग्लुकोज भन्दा बढी फ्याट खान बाध्य पार्नु हो। इन्सुलिन उत्तर होईन - यसले ग्लुकोजलाई सामान्य स्तरमा राख्छ र यसलाई स्पाड्समा भण्डार गर्दछ। जे भए पनि यसले कोषहरूलाई ग्लुकोज खानको लागि तत्त्व दिन्छ, मोटो हुँदैन, साथ साथै कलेजोमा फ्याटी एसिडहरूको गठन बढाउँदछ।
तर एचजीएच एक प्रकारको इन्सुलिनको विरोधी हो, कोशिका ग्लुकोजको प्रयोग घटाउन र फ्याटी एसिड खान बाध्य पार्दैछ। यो गर्नका लागि, यसले फ्याट सेलको झिल्लीमा आफूलाई समाहित गर्दछ र यातायात प्रणालीको रूपमा काम गर्दछ जुन उनीहरूलाई फ्याटी एसिडबाट रगतमा ल्याउँछ, र उनीहरूलाई अक्सीजन दिन्छ। अर्को शब्दहरुमा, यसले लिपोलिसिसको प्रक्रियालाई परिवर्तन गर्दछ, जस्तै फ्याट सेलको संख्या घटाउने।
र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कुनै HGH फ्याक्ट सेलहरू केवल यसको सामग्री छोड्दैन र नष्ट हुँदैन। तर यदि शरीरको कोशिकालाई बढी फ्याटी एसिडको आवश्यक पर्दछ, र वृद्धि हार्मोनको कार्य अन्तर्गत फ्याट सेलहरूको बिग्रन, र निक्षेपबाट बोसोको परिचालन बढ्नेछ, जसले वजन घटाउँदछ।
यदि तपाईं वास्तवमा सारांश गर्न चाहानुहुन्छ भने शरीरले आफ्नै फ्याट खान शुरू गर्दछ। र यसको लागि, पहिलो र सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण, तपाईंलाई विकास हर्मोनको पर्याप्त मात्रामा आवश्यक छ।
बैंककमा वजन घटानेको लागि वृद्धि हार्मोनको कोर्स
त्यहाँ विकास हार्मोनको धेरै रिमिमसहरू छन्। ती प्रत्येक मध्ये विभिन्न उद्देश्यहरू हुन् र तिनीहरू मध्ये कुनै थाइल्याण्डमा डाक्टरसँग परामर्श गर्नु भन्दा उत्तम हो। वा, कम से कम, निश्चित वजन खोने को लागि वहाँ थाइरोइड हार्मोन र सेक्स हार्मोन संग कुनै समस्या छैन, अन्यथा HGH को अपेक्षित प्रभावहरु लाई प्रदर्शित गर्दैन।
वजन घटाने को लागि HGH को क्लासिक कोर्स र मांसपेशियों को राहत को प्राप्त गर्न को लागी दैनिक को लागी2एकाइहरु को उपचर्या इंजेक्शन संग शुरू हुन्छ। यदि उनीहरूले साइड इफेक्टहरू (तल) प्रदर्शन गर्दैनन् भने, त्यसपछि दोस्रो हप्ता तपाईं एक्सएनमक्स एकाइहरूमा खुसी बढाउन सक्नुहुन्छ, तर विकास हार्मोनको ठूलो खुराकको शरीरमा अझ बढी लामो उपस्थितिले यस तथ्यलाई निम्त्याउँछ कि प्यान्रेरायस सम्पूर्ण राशि को संतुलन को प्रयास को इन्सुलिन को कारण राशि ओवरवर्क गरिएको छ।
नोट: कहिलेकाहीँ पनि अतिरिक्त इन्सुलिन इंजेक्शनहरू गरेर प्यान्रेराहरू मद्दत गर्न सिफारिस गर्दछ। तर योजनाहरु को लागि उच्च खुराक मा वृद्धि हार्मोन को उपयोग को लागि महत्वपूर्ण छ, प्रति दिन5एकाइहरु भन्दा अधिक।
जब शरीर मा यसले हार्मोन हार्मोन इंजेक्शन गर्न को लागी सबै भन्दा राम्रो सम्भावित अवस्थाहरू सिर्जना गर्दछ, यदी कम रक्त शर्कराको साथ। यो खाने भन्दा पहिलेको अवधि (बिहानको खाली पेटमा राम्रो समय) र तीव्र व्यायामको दौरामा वा पछि पछि, जब शारीरिक क्रियाकलापमा चिनियाँ उपभोग गरिन्छ। सिफारिस गरिएको कष्टप्रद इंजेक्शन, हुनत त्यहाँ HGH intramuscularly को परिचय को बारे मा सकारात्मक टिप्पणीहरु थिए। सामान्यतया पेट मा इंजेक्शन, जो यस क्षेत्र मा वसा जलाने को बिंदु मा मदद गर्दछ।
एचजीएचको प्रभाव बढाउनको लागि पाठ्यक्रम को एथलेटिक प्रशिक्षण को मुख्य रूप मा प्रवेश गर्न को आवश्यकता हो, मुख्य रूप देखि शक्ति को लागि, एक सप्ताह मा 2-3 पल्ट। आवधिक रूपमा तालिम प्रशिक्षण एरोबिक पतला हुनु आवश्यक छ। विकास हार्मोनले शरीरलाई मोटा चयापचयमा स्विच गर्न मद्दत गर्न, तपाईले नरम कार्बोहाइड्रेट-मुक्त आहार प्रविष्ट गर्न सक्नुहुनेछ। सामान्यमा, यद्यपि औसत क्यालोरी आहार (जस्तै खाना खाने र त्यही क्यालोरीको बारेमा खर्च गर्न सिफारिस गर्नको लागि सिफारिस गरिएको छ), थप क्यालोरीहरूसँग विद्युत आपूर्ति सर्किट वांछित बोसो जलप्रवाह ल्याउन सक्छ।
कोर्सको क्रममा सबै भन्दा राम्रो तौल घटाउन पिउन र अन्य वजन घटाउन सिफारिश गरिन्छ - बृद्धि हार्मोन प्रायः तिनीहरू मध्ये कुनै एकसँग टकराउँदैन। विशेष गरी राम्रो थाइरोइड हार्मोनहरू, जस्तै थाइरोक्सिन (100-150 dailyg दैनिक) वा ट्रायोडायोथेरोनिन (25 µg दैनिक)।
तिनीहरू आफैंले फ्याट बर्नरहरू मात्र होइन, तर थाइरोइड ग्रंथिमा पनि लाभदायक प्रभाव पार्छन्। र बृद्धि हर्मोनको क्रममा उनलाई यसको आवश्यकता हुन्छ - HGH ले यसको कार्य रोक्छ र यसको बृद्धि हुन सक्छ, ताकि यस अवधिमा थाइरोइड हार्मोनहरूले सम्भावित साइड इफेक्टको अभिव्यक्ति कम गर्न मद्दत गर्दछ।
विकास हार्मोनको कोर्समा ईसीए र क्लेब्रोबोलोल पृष्ठभूमि पनि तपाईंको मोटो जलविद्युत् प्रभाव बढाउन सकिन्छ, तथापि, यसको प्रभावकारी पक्षका असरहरू बढ्छ।
HGH को साइड इफेक्ट
वास्तवमा, HGH मानव शरीरको लागि प्राकृतिक हो। उदाहरण को लागी, उमेर संग, मानव मा यसको "आफ्नै" मात्रा कम छ, ताकि बाहिर बाट HGH प्राप्त को पुनर्स्थापना एकदम हानिरहित घटना देखिन्छ, अधिक त यो शरीर मा हार्मोन स्वतन्त्र दबाउन छैन जब।
यो HGH को न्यूनतम साइड इफेक्टहरू छन्। यो अक्सर स्टेरोइडको साथ तुलना गरिन्छ (प्रभाव समान छ, र व्यक्तिको समान समूह को बारे मा प्रयोग गर्दछ), तर यसले यौन हार्मोनको उत्पादनलाई असर गर्दैन, र कारबाही को एक अलग संयन्त्रको कारण कम अप्रिय परिणामहरू छन्। साथै पोस्ट-चक्र थेरापीको लागि विकास हर्मोनको कोर्स आवश्यक भएपछि यसले आफ्नो सुरक्षाको बारेमा पनि बताउँछ।
थाइल्याण्डमा एक मिथक छ कि वजन घटाउन ग्रोथ हार्मोनको प्रयोगले कान, नाक, गाला, जिब्रो, उपास्थि, हड्डी (जोड्ने ठाउँमा जोडिएको ठाउँमा बदसूरत झुप्पा देखा परेमा) बढ्छ। र अन्य आन्तरिक अ organs्गहरू (उदाहरणका लागि "गर्भवती शरीर सौष्ठवहरू" दिइएका पेशागत एथलीटहरू हुन् जसले शरीर बृद्धि गरेका छन् र अब चरित्रात्मक रूपमा पेट उचाल्ने)।
यो सबै वास्तवमा देखा पर्न सक्छ, तर केवल तपाईं सिफारिश खुराक को एक महत्वपूर्ण अधिक संग औषधि दुरुपयोग जब। एक साधारण प्रयोग HGH वजन घटाने जस्तै छैन।
HGH-carpal tunnel सिंड्रोम को सबै भन्दा अक्सर वास्तविक साइड इफेक्ट, अंग को नम्रता द्वारा विशेषता। तर यो बाह्य मा मांसपेशिहरु को संपीड़न संग मांसपेशी मा वृद्धि भएको छ, यसैले वजन घटाने को दर सिंड्रोम को कम जोखिम छ।
माथि उल्लेख गरिएको पान्सेरा र थाइरोइड ग्रंथिमा नकारात्मक असर। क्रमश: इन्सुलिन र थाइरोइड हार्मोनहरू क्रमशः। विकास हार्मोन प्रकार्यको विच्छेद पछि, ग्रंथहरू रिक्त हुन्छ।
दुर्लभ साइड इफेक्ट दबावमा वृद्धि हुन्छ, जुन HGH को खुराकहरू रोक्न वा घटाउन सक्छ वा रक्तचाप घटाउने औषधिहरू रोक्न सक्छ।
थाइल्याण्डमा विकास हार्मोन कहाँ छ?
खरिद वृद्धि हार्मोन सम्भवतः उनको पाठ्यक्रमको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण चरण हो। तथ्य यो हो कि अधिकांश डाईटर डीलरों देखि "हातहरु संग" या संदिग्ध वेबसाइटहरु मार्फत खरीद रहे हो। तर थाइल्याण्डको औषधिको 75% एक तोडिएको नकली। र वास्तविक जीवन साथीहरू खरिद गरेको हुन सक्छ तथ्य यो कारणले गर्दा यो गलत तरिकाले भण्डार गरिएको थियो किनभने काम गर्दैन - HGH फ्रिजमा राख्नु पर्छ, यो आफ्नो शेल्फ जीवन बढ्छ।
एक निष्कर्ष मात्र मा वृद्धि हार्मोन किन्न चाहन्छ फार्मेसी। यो निषिद्ध लागूपदार्थ हो, तर केवल खेलहरूको लागि (डपिंग)। वजन घटानेको लागि वृद्धि हार्मोन किन्नुहोस् तपाईं बैंककमा सजिलै कानूनी रूपमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ। प्रमाणित औषधि HGH हुन् "Genotropin","Ansomone"र" जिंग्रोपिन "। सबै। र लोकप्रिय" शीर्ष चार "," नीलो शीर्ष "र" नॉर्डिट्रोपिन "100% नकली हो। र जब तपाइँ एक प्रमाणित दबाइ फार्मेसी किन्नु हुन्छ भने तपाईले प्याकेजिङ्गमा सुरक्षा स्टिकर जाँच गर्न नबिर्सनु पर्दछ यो नक्कली लडाइँको सामना गर्न निर्माताहरूद्वारा संलग्न छ।
यसमा दायर गरिएको: HGH वजन कम
अघिल्लो लेखमा इंजेक्शन HGH को लागी समय, Genotropin IU को सिफारिश खुराक
अर्को लेखमा महिलाका लागि HGH - थाइल्याण्डमा एन्टि-एजिंग थेरापी